အခမဲ့များအတွက်အော်တိုဘလူးတုသ် | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အော်တိုဘလူးတုသ်
အော်တိုဘလူးတုသ် APK ကို
AutoBluetoot မကြာသေးမီက androidmag.de ကနေ4ကြယ်များထဲကတစ်ခုချီးမြှင့်,5တယ်နဲ့သူတို့ရဲ့မဂ္ဂဇင်း DEZ / Jan 2013 ပုံနှိပ်ခဲ့သည်။
သငျသညျဖုန်းခေါ်လက်ခံရရှိလျှင်ဤ App ကိုအလိုအလျှောက်ဘလူးတုသ်ကို enable နှင့်ရွေးချယ်မှုသင့်ရဲ့ device ကိုမှချိတ်ဆက်လိမ့်မယ်။ အဖြစ်မကြာမီသငျသညျခေါ်ဆိုမှုကိုအဆုံးသတ်သည်အတိုင်း, လျှောက်လွှာနောက်တဖန်ဘလူးတုသ်ကို disable ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးကားထဲတွင်သို့မဟုတ်လျှင်သင်၏လက်အပြည့်အဝရှိပါတယ်စဉ်ဤဥပမာသည်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
သင်ကလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဘလူးတုသ်သာသင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာ run ပါလိမ့်မယ်နှငျ့သငျရုံအော်တိုဘလူးတုသ်ကို install နှင့်အတူကြီးမားတဲ့သင့်ရဲ့ဘက်ထရီသက်တမ်းတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။
- အလိုအလျောက်ဖုန်းခေါ် ingoing အပေါ်အပေါ်နဲ့ off Bluetooth ကိုဖွင့်
- Widget လေး
ထိုကဲ့သို့သောလက်အခမဲ့ပစ္စည်းများ, FSE, နားကြပ်များနှင့်အများအပြားကပိုအဖြစ်, Bluetooth ကိရိယာတစုံတမျိုးနှင့်ပေါင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ရုံကကြိုးစား app ကိုတိုးတက်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီသောကြောင့်လုံးဝ Adfree ပါပဲ။
လက်ရှိ CURRENT VERSION: 1.5
သြဂုတ်လ 26, 2014 မှာ 11: 17 ညနေ
ငါသည်ငါ့ samsung s4mini ဆင်းဝန်မှဒီ app ကြိုးစားခဲ့! ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးနောက်ဖွင့်လှစ်ရန်ပျက်ကွက်! မဆိုအကြောင်းရင်းဘာကြောင့်လဲ ... ။
sm hadish says:
ဇူလိုင်လ 17, 2014 မှာ 10: 34 ညနေ